Archive du 20181215
Fifanatrehana faharoa Tsy hifampitsitsy Ravalo sy Rajoelina
Nisy ny fivoriana niarahan'ny CENI tamin'ny ORTM sy ny mpanentana ny fandaharana, ny solontenan'ny kandida roa tonta, ary ireo solontenan'ny
Tontolo politika Vaky ny ambany tanàna
Azo ambara fa vaky ny eny ambany tanàna ankehitriny . Resy lahatra indray mantsy fa hanohana ny kandidà n°25 i Norbert Favoris “Norbert Arnès Razafimbelo” izay fantatry ny depiote Rossy tsara fa samy nanohana ny kandidà n° 13 izy ireo tamin’ny fihodinana voalohany.
Fikambanana Asandratro ny fireneko Tian’ny sokajin’olona rehetra Ravalomanana
Nandiso tanteraka ny feo mandeha ankehitriny ny profesora James Ratsimba, filohan’ny fikambanana Asandratro ny fireneko omaly mikasika ny filazan’ny sasany fa tsy tian’ny any anindrana sy ny tambanivohitra ary ny manam-pahaizana ny kandida Ravalomanana. Izy no tena tian’ny olona,
Mpanohana ny kandida Vato fotsy Raikitra ny fampielezan-kevitra
Niantso ireo olompirenena 48% tsy tonga nifidy omaly ry zareo avy eo anivon’ny hetsika ho an’ny vato fotsy na Mouvement vote blanc.
Andry Rajoelina Mandindona azy ny faharesena…
Nangingina tsy toy ny talohan’ny fihodinana voalohan’ny fifidianana filoham-pirenena ny fampielezankevitry ny kandida Andry Rajoelina tamin’ity fihodinana faharoa ity. Mampametra-panontaniana antony.
Manampy betsaka ny CENI ny EISA
Nanatanteraka hetsika fanentanana ho an’ny olom-pirenena Malagasy tsirairay avy ny fikambanan’ny tanora mianatra eny amin’ny oniversite mivondrona ao amin’ny AU Projet omaly zoma 14 desambra.
Sesilany ny hetraketraka Mpikamban’ny K25 norasaina famaky
Mitohy ny herisetra na ara-batana na ara-tsaina atao amin’ny mpanohana ny kandida laharana faha-25 Marc Ravalomanana, izay saika hahitana izany na ambanivohitra na an-drenivohitra.
Teti-dratsy amin’ny fifidianana Novakian’ny SAMARITANA bantsilana
Namaky bantsilana ny kajikajy politika maloto katsahina hatao amin’ny fififidianana ny fikambanana SAMARITANA na Sahy Marina Tia Tanindrazana:
Vondrona Eoropeanina-Madagasikara Tetikasa goavana no hatao amin’ny 2019
2 109,7 tapitrisa euros ny fitambaran` ny volan`ny Vondrona oropeanina tao anatin`ny tahiry eoropeanina momba ny fampandrosoana (FED) hatramin`izay nentina nanatsarana ny politika, ny toekarena ary ny sosialy ka hitohy ao anatin`ny dinika politika hatramin`ny taona 2020.
Edito Manao adin’ny resy
Na dia mbola ato anatin’ny fampielezan-kevitra ary mamaramparana aza isika ankehitriny dia lohahevitra sy ventin-kevitra iray ezahan’ireo tonga saina hafantoka any an-tsain’ny rehetra ihany koa ny fihavanana sy fampihavanana.
FIKAMBANANA HAFARI, ASTAFIM, ASCOM Mijoro hanatsara ny sosialim-bahoaka
Vonona ny hijoro hanatsara ny sosialim-bahoaka ny fikambanana HAFARI Malagasy sy ny Astafim ary ny Ascom. Nanambatra ny heriny nivondrona ao anatin’ny fikambanana FJN ( Fond des Jeunes National Madagascar)
Toe-javatra iray misy manararaotra ho fitaovana politika amin’izao fotoana izao ny fitantanana ny fako eto Antananarivo.
Tetibolam-panjakana 2019 400 tapitrisa ho an’ny CLD, 800 ho an’ny kaominina
Naharitra 60 andro ny fivoriana ara-potoana faharoan’ny parlemantera izay nanomboka ny 16 oktobra lasa teo, ka nifarana omaly teo anivon`ny Antenimiera roa tonta.
Famatsiam-bola avy any ivelany Mila fahaiza-mampiasa mba hisy vokany
Tsy mbola mahaleotena i Madagasikara ary tena mbola firenena sokajiana ho marefo. Araka izany dia mila ny fanampiana sy ny fanohanana avy any ivelany, indrindra amin’ny lafiny famatsiam-bola.